P4.81 Bandhigga Dibadda ee LED-ka ee Loogu Talo Galay Kireysiga
Isticmaalka qaabdhismeedka kuleylka khaaska ah wuxuu sameeyaa kuleyl aad u wanaagsan, Howlgal xasilloon oo bilaa taageerayaal ah. Niyad jab weyn / Isbarbardhig sare / Sawir gacmeed sare / Muuqaal qurux badan oo muujinaya Muuqaalka guud ee ballaadhan ee isha ayaa ku siinaya aagga ugu weyn ee daawashada shaashadda. gaadiid, fiditaan wanaagsan iyo bilaa sumad
Kirada LED-ka ayaa soo bandhigtay qiimeyn aan biyuhu lahayn oo gaadhay IP65
Badanaa waxaa loo isticmaalaa pcrfonnance, shirar, bandhigyo, haramaha, aasaaska, furitaanka furitaanka, dhiirrigelinta iyo howlaha kale, qaab dhismeedka asalka marxaladda. nalalka iyo qalabka dhawaaqa iyo qalabka saamaynta gaarka ah meelaha kirada ah. Gamut Wide Wide
Fiditaanka Kuleylka Birta
Heerka Cusboonaysiinta Sare
Miisaan Fudud oo La Qaadan Karo
Farsamo fudud Naqshad qaabdhismeedka cidhiidhiga ah, dhumucda kabadhka kaliya 80nun, qaadis fudud oo fudud iyo kabadh fudud oo keliya 13kg, Fudud in lnstall iyo kharashka gaadiidka lagu keydiyo.
toosan 150, muuqaal 120 muuqaal ah oo muuqaal ah, ka dhig shaashaddaada inay leedahay aag aad u ballaaran oo daawasho ah oo heli kara macluumaad tayo sare leh dhinac kasta oo aad u socoto.
Sawir qeexitaan sare
Cusbooneysiin sare / Farqiga sare wuxuu gaari karaa 16 xoogaa.
Ku siiya dareemo muuqaal midab leh
Cusbooneysiin sare 3840Hz
Farqiga sare 4000: 1
1. Kala-bax aan kala go ’lahayn, waa la hagaajin karaa, si fududna loo ilaalin karaa.
2. Qaylada hoose, isticmaalka hooseeya, hubi cimriga dheer.
3. Aluminium-da-dhinta oo aluminium ah oo baahsan ayaa badbaadin kara qiimaha korontadaada.
4. Qalab tayo sare leh oo loo yaqaan 'LED chip', xagal daawasho ballaadhan, fidsannaan wanaagsan, ka-hortagga, iftiin sare, hoos u dhigid hoose, xasillooni wanaagsan.
5. Wuxuu qaataa 500x1000mm cabbirka cabbirka, rakibidda degdegga ah, muuqaalka muuqaalka leh oo leh xagal ballaadhan. Noocyada muuqaalka muuqaalka, fududahay in la shaqeeyo.
6. Naqshadeynta qaabdhismeedka golaha wasiirada, si loo sameeyo isla cabirka golaha wasiirada ayaa lagu quseyn karaa muuqaalka pixel-ka kala duwan.Sidaas darteed, way ka sahlan tahay rakibidda iyo kala-goynta shaashadda oo dhan. Naqshadeynta khafiifka khafiifka ah, keydso kharashka gaadiidka.
7. Sidoo kale waxaad ku samayn kartaa P3.9 Gudaha, P3.9 dibedda, P4.81 bandhig kiro ah oo dibadda ah.
P5.95 Waxsoosaarka Maqalka Maqalka ee Dibadda ...
P8.925 Bannaanka Dabacsan LED Video Wall Gaari ...
P8 Shaashadda Furan ee Hawada LED ee Dhacdooyinka Ciyaaraha
P3.91 Kirada Dibadda LED Video Video
P3.9 Alquiler Evento Gudaha Soo Saarida Videowal ...